မငျး အသကျရှငျနတေယျဆိုတာ သိပွီပဲ ငါရှငျသနျဖို့ လုံလောကျပါပွီ … – Shinyoon
မငျး အသကျရှငျနတေယျဆိုတာ သိပွီပဲ ငါရှငျသနျဖို့ လုံလောကျပါပွီ …
May 21, 2021 by Shin Yoon
အမွဲတမျးချေါခငျြနတေဲ့ ဖုနျးနံပါတျလေးတဈခုကို အခြိနျတှေ အကွာကွီးနမှေ ချေါဖွဈတယျ ကိုယျ့ကို မသိနိုငျမယျ့ ဖုနျးလေးတဈလုံးနဲ့ပေါ့ ဟယျလိုတဲ့… မငျးအသံလေးကွားလိုကျရတယျ ဒီလောကျဆို လုံလောကျပွီပေါ့ ဟယျလိုဆိုတဲ့အသံလေးက မငျးကောငျးကောငျးမှနျမှနျရှငျသနျနတေယျဆိုတဲ့အကွောငျး သိခဲ့ရပွီပဲ အဲ့ဒီတဈလုံးနဲ့တငျ အသကျဆကျရှငျဖို့ လုံလောကျပါတယျ ။
အရငျကလို အရမျးလှမျးတာပဲဆိုပွီး မကွားခငျြတဲ့ စကားတှေ အမြားကွီးပွောပွီး မနှောငျ့ယှကျဖွဈတော့တာကလှဲရငျ အခြိနျရှိသမြှ မငျးကို လှမျးပါတယျ … အနားရတဲ့အခြိနျလေး တဈစက်ကနျ့လေးမှာတောငျ မငျးအကွောငျးကို တှေးဖွဈတယျ …
မငျးအကောငျ့လေး မီးမစိမျးတော့ရငျ ကိုယျ့မှာ စိတျပူရတယျ မငျးအကောငျ့လေး မီးစိမျးနရေငျ ဘယျသူနဲ့ပဲ ပြျောနပြေျောနပေါ ကိုယျ့မှာ ငေးကွညျ့ရငျးက မငျး ရှငျသနျနတောပဲဆိုပွီး ဖွသေိမျ့ရတယျ … မလိုမှနျးသိနရေဲ့နဲ့ ရပျနမေိရုံလေးပါ .. ပြျောနမှေနျးသိရဲ့နဲ့တော့ မနှောငျ့ယှကျခငျြတော့ပါဘူး ဘာကွောငျ့လဲလို့ မေးရငျ သိပျခဈြလို့ဆိုပွီး ဖွရေုံက လှဲလို့ တခွားအဖွတှေေ မတှခေဲ့ဘူး …
တကယျကို သိပျခဈြခဲ့တာပါ … ခဈြလှနျးတော့လဲ စှနျ့လှတျရဲရတာပေါ့ … အတိတျကို ပွနျလှမျးကွညျ့ပွီး အရငျတုနျးက မငျးကို ပွနျလိုခငျြနလေို့မှ မရပဲလေ … သူကိုယျတိုငျက မလိုအပျတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ စကားကို အကွိမျကွိမျ သုံးခဲ့ပွီးပွီပဲ ဘေးထှကျထိုငျရငျ ကိုယျနဲ့ဆိုငျခဲ့ဖူးပါလားဆိုတဲ့ အသိနဲ့ငေးကွညျ့ရုံပဲပေါ့ …
ဖုနျးတှဆေကျခငျြပမေယျ့လဲ ကိုယျ့ဖုနျးမှနျးသိတဲ့အခါ မကိုငျမှနျးသိလို့အမညျမသိတဲ့ ဖုနျးတှနေဲ့ချေါရတယျ ကိုယျဆကျသှယျမှနျးသိတဲ့အခါ ပွောငျးပဈမှာ စိုးလို့ အသံမထှကျပဲ ခိုးနားထောငျရတယျ ရပါတယျ ဟယျလိုဆိုတဲ့ အသံလေးက မငျးရှငျသနျနတေယျဆိုတဲ့ လုံလောကျတဲ့ သကျသပေဲလေ … အဆငျပွလေားလို့တောငျ မေးခှငျ့မရှိတော့တဲ့ ဘဝမှာ ရှငျသနျနတေယျဆိုရုံနဲ့ အသကျဆကျရှငျဖို့ လုံလောကျရမှာပေါ့ ….
မင်း အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာ သိပြီပဲ ငါရှင်သန်ဖို့ လုံလောက်ပါပြီ …
အမြဲတမ်းခေါ်ချင်နေတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုကို အချိန်တွေ အကြာကြီးနေမှ ခေါ်ဖြစ်တယ် ကိုယ့်ကို မသိနိုင်မယ့် ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ပေါ့ ဟယ်လိုတဲ့… မင်းအသံလေးကြားလိုက်ရတယ် ဒီလောက်ဆို လုံလောက်ပြီပေါ့ ဟယ်လိုဆိုတဲ့အသံလေးက မင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်သန်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သိခဲ့ရပြီပဲ အဲ့ဒီတစ်လုံးနဲ့တင် အသက်ဆက်ရှင်ဖို့ လုံလောက်ပါတယ် ။
အရင်ကလို အရမ်းလွမ်းတာပဲဆိုပြီး မကြားချင်တဲ့ စကားတွေ အများကြီးပြောပြီး မနှောင့်ယှက်ဖြစ်တော့တာကလွဲရင် အချိန်ရှိသမျှ မင်းကို လွမ်းပါတယ် … အနားရတဲ့အချိန်လေး တစ်စက္ကန့်လေးမှာတောင် မင်းအကြောင်းကို တွေးဖြစ်တယ် …
မင်းအကောင့်လေး မီးမစိမ်းတော့ရင် ကိုယ့်မှာ စိတ်ပူရတယ် မင်းအကောင့်လေး မီးစိမ်းနေရင် ဘယ်သူနဲ့ပဲ ပျော်နေပျော်နေပါ ကိုယ့်မှာ ငေးကြည့်ရင်းက မင်း ရှင်သန်နေတာပဲဆိုပြီး ဖြေသိမ့်ရတယ် … မလိုမှန်းသိနေရဲ့နဲ့ ရပ်နေမိရုံလေးပါ .. ပျော်နေမှန်းသိရဲ့နဲ့တော့ မနှောင့်ယှက်ချင်တော့ပါဘူး ဘာကြောင့်လဲလို့ မေးရင် သိပ်ချစ်လို့ဆိုပြီး ဖြေရုံက လွဲလို့ တခြားအဖြေတွေ မတွေ့ခဲ့ဘူး …
တကယ်ကို သိပ်ချစ်ခဲ့တာပါ … ချစ်လွန်းတော့လဲ စွန့်လွတ်ရဲရတာပေါ့ … အတိတ်ကို ပြန်လှမ်းကြည့်ပြီး အရင်တုန်းက မင်းကို ပြန်လိုချင်နေလို့မှ မရပဲလေ … သူကိုယ်တိုင်က မလိုအပ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ စကားကို အကြိမ်ကြိမ် သုံးခဲ့ပြီးပြီပဲ ဘေးထွက်ထိုင်ရင် ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ခဲ့ဖူးပါလားဆိုတဲ့ အသိနဲ့ငေးကြည့်ရုံပဲပေါ့ …
ဖုန်းတွေဆက်ချင်ပေမယ့်လဲ ကိုယ့်ဖုန်းမှန်းသိတဲ့အခါ မကိုင်မှန်းသိလို့ အမည်မသိတဲ့ ဖုန်းတွေနဲ့ခေါ်ရတယ် ကိုယ်ဆက်သွယ်မှန်းသိတဲ့အခါ ပြောင်းပစ်မှာ စိုးလို့ အသံမထွက်ပဲ ခိုးနားထောင်ရတယ် ရပါတယ် ဟယ်လိုဆိုိတဲ့ အသံလေးက မင်းရှင်သန်နေတယ်ဆိုတဲ့ လုံလောက်တဲ့ သက်သေပဲလေ … အဆင်ပြေလားလို့တောင် မေးခွင့်မရှိတော့တဲ့ ဘ၀မှာ ရှင်သန်နေတယ်ဆိုရုံနဲ့ အသက်ဆက်ရှင်ဖို့ လုံလောက်ရမှာပေါ့ ….
နှဈတှအေကွာကွီး ခဈြခဲ့တာလလေို့တော့ မငွီးတှားခငျြတော့ပါဘူး ဒါပမေယျ့ လမျးခှဲလိုကျဖို့ကတြော့လဲ လှယျလိုကျတာ ..